You are here: Home somal Ciyaaruhu waa madal abuuri karta isdhexgal bulsho iyo walaalayn.
Waxaan idin leenahay aniga iyo inta aanu isku aragtida nahay ku soo dhawaada gacmo furan, qalbi furan iyo walaaltinimo. Guud ahaan gobolada maroodi jeex iyo xulkiisa qaranka ee kala duwan ee martida loo yahay, waxa la idinka fadhiyaa yar iyo waynba soo dhawyn caaqibo leh oo aad u heersanaysa. si war fiican ay idiinka geeyaan shacabkoodii marka ay ku guryo noqdaan.
Dhanka kale waxaan ku dhiiri galinayaa dhamaan in ciyaartoyda kala duwani ay soo bandhigaan ciyaaro aad u heersareeya iyaga oo ilaalinaya nimaadka u yaala ciyaaraha iyo kala danbaynta inta lagu gudo jiro Tartanka. Kana gudooma shacabku sida ay idinku fidiyeen soo dhawaynta iskana ilaaliya wax alle wixii keeni kara akhlaaqad xumo iyo nimaad daro.
Dhamaan maamulka kala duwan ee gacanta ku haya geedi socodka tartanka ee ay hormoodka ka tahay W.DH.C iyo Dalxiiska ee dhalinta intaa leeg iskugu keentay una furtay madal ay ku loolamaan iskuna bartaan, wasaarad ahaana waxaad gudateen waajib idin saarnaa halkaasna ka sii wada xoojiyana kulamada ciyaaraha ee kala duwan.
Waxaan ognahay in dhalintani yihiin ergooyin ka kala socda gobolada ay ka soo kala jeedaan, waxaay kala noqodaan ayaa noqon kara mid bulshada isku soo dhaweysa ama noqon karta mid aan faa’ido laga gaadhin.
Tartankan faa’idooyinka la taaban karo ee dhaxalgalka ah waxaa ka mid ah ..
Isdhexgal bulsho, Walaalayn, Seexiibo cusub, Shaqo abuuris, Il dhaqaale soo saar.
Gabogabadii waxaan baaq u dirayaa shacab waynaha reer Somaliland, ganacsatada, ciyaartoyda iyo haayadaha amniga. Shacabka reer hargiesa waa in aad soo dhawaysaan dhalinyarada inooga kala timid gobolada dalka oo qaar kood aaday inooga fogyihiin, ganacsataduna waa inay si hagar la’aan ah uga qayb qaadataa tartarka, ciyaartoyda kala duwana gacan la xaad leh siiyaan.
Ciyaartoyda xulalka kala duwan waa in ay la yimaadaan akhlaaq wanaag una hogaansamaan garsoorka dhexdhexaadinaya ciyaarta inta uu tartanku socdo, lana timaadaan ciyaar xirfadeedu sareeyso, aadna u xiiso galin karta dadwaynaha.
Hayadaha amniga ee kala duwan guud ahaan waxaan ku dhiiri galinaynaa sida wanaagsan ee ay had iyo jeer diyaarka ugu yihiin sugida amniga iyo kala danbaynta, shacab iyo ciyaartoyba waa in lala shaqeeyaa haydaha amniga waana arin inagu wada waajib ah,
“Barbarkaay ka baxdaa waa bakaylo qaleen”
Amiin Abdilahi Hashi